Ifayibha optic umasifundisane cable - Yuyao Jera Line Lokulinganisa Co., Ltd.
Inguqulelo kaJera Fiber kukufezekisa ukubakho kwemveliso kunye nokubonelela ngesisombululo esipheleleyo kulwakhiwo losasazo lothungelwano lonxibelelwano. Ukusukela ngonyaka we-2019, uJera wayenetekhnoloji yokuvelisa intambo yefayibha.
Iworkshop yokuveliswa kwentambo yeJera fiber optic ineendlela ezi-2 zokuvelisa intambo. Oomatshini bomtya wentambo ziimpawu ezaziwayo zamanye amazwe. Iworkshop yeJera fiber ivelisa ikakhulu intambo ye-FTTX ngeendlela ezimbini:
Iindlela zokufaka zangaphandle (zasemoyeni)
Iindlela zokufaka ngaphakathi
Amandla emveliso yeelayini zimbini ngama-500km ngosuku, izikhongozeli ezi-5 ngenyanga.
Indlela yephakheji ihlala i-1km kwigubu lomthi kunye nebhokisi. Senza ngokusesikweni indlela yokupakisha.
Sihlola izinto ezingenayo ezingekho mgangathweni ngokwemigangatho ye-ISO 9001: 2015 kunye ne-CE.
Iintambo zethu zefiber optic zenziwe nge-G657A1, i-A2 fiber core, i-FRP kunye nezinto zentsimbi, imozulu kunye neplastiki ye-LSZH enganyangekiyo.
Umgca weJera uyakwazi ukuphuhlisa iimveliso ezintsha okanye wenze ngokwezifiso uluhlu lwemveliso yangoku ukuze ukhuphisane ngakumbi, kwaye ube nakho ukubonelela abathengi bethu ngokunikezela kunye nomgangatho ophezulu.
Siphucula izibonelelo zemveliso kwaye sinomgaqo-nkqubo wokulungisa iindleko ngokufanelekileyo kunye nokuzenzekelayo.